let me know how to change the links name - MYSTERY ZILLION
let me know how to change the links name
June 2008 edited March 2009 in Internet & Email
လင်.တွေကို နာမည် ဘယ်လိုပေးလဲ သိချင်လို.ပါ။
ကျွှန်တော်က လူသစ်မို.ဘယ်မှာမေး၇မှန်းမသိလို. ဒီလင်. ထဲမှာမေးလိုက်တာ။
ဘယ်လင့်တွေကို ဘာနာမည်တွေပေးချင်တာပါလိမ့် ဗျာ
နဲနဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲလေးကိုပြောပါလား...
သိချင်တာက ဥပမာ၊ ၊ ဒီ post တစ်ခုမှာ ရေးတော့မယ်ဆို ပထမတစ်ကြောင်းက post ခေါင်းစဉ် နောက် အောက်မှာ အကြောင်းအရာ ရေးတာ နှစ်ခုရှိတာမှာ
ခေါင်းစဉ်ကို ရေးပြီးမှ ပြင်ချင်တာကိုများ သိချင်တာလားဗျာ ... အကြောင်းအရာကတော့ ပြင်လို့ရပါတယ် ခေါင်းစဉ်ကတော့ ပြင်ခွင့်ပေးမထားဘူးထင်တယ်
ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါတလေ ပြင်ချင်စိတ်ပေါက်ပါတယ် ပြင်လို့မရလို့ မပြင်ပါခင်ဗျား .... အဖြေတည့်ကောင်းပါရဲ့
citizen Status: Offline
ကွှျန်တော်မေးချင်တာက အဲဒီ ဒီမှာ ဆိုတာမျိုး လုပ်ချင် လို.။
a haw သဘောပေါက်ပြီ။ အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်ရင် လုပ်ချင်တဲ့စာလုံး (eg. 'ဒီမှာ'ဆိုတဲ့စာလုံး) ကို selete မှတ်ပြီး
အနီ၀ိုင်းလေးထဲက earth ပုံလေးကို click နှိပ်ပါ။ (စာရိုက်သောနေရာဧ။် အပေါ်ဘက်တွင်ရှိသည်။ click ထောက်လိုက်လျှင် insert link ဟုပေါ်နေလိမ့်မည် ) ပြီးရင် ကိုယ်ညွှန်းချင်တဲ့ site ကိုပေါ်လာတဲ့ box မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
အဲလို အော်အော်ဆိုတာဘဲ။ သြော် ဟေမာနေ၀င်းဖြစ်မယ်။ အိုကွယ် ခပ်ရှင်းရှင်းပြောကွယ် ဆိုတာလေ။ နားထဲစွဲခဲ့တာ။
ခုလည်း naytoe ရေ ... အိုကွယ် ခပ်ရှင်းရှင်းပြောကွယ် ... ဟီး
လင်တွေကို နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ လန့်သွားတာဘဲ။ ဘာတဲ့ လင်ကြီး၊ လင်ငယ်၊ လင်ရွယ်၊ လင်လတ်၊ လင်ငယ်၊ လင်ထွေး၊ လင်ပုစုကွေး စသဖြင့် စဉ်းစားနေတာ။
ခုတော့ လင့်ပါတဲ့ခင်ဗျား။ လင်မဟုတ်သော လင့်။
Star Lay ဖြေပြီးသွားပြီဆိုတော့ ရသွားပြီထင်ပါတယ်နော။
အစ်ကိုရေးတဲ့စာတွေဖတ်ပြီး internet ဆိုင်မှာခွက်ထိုးခွက်လှန် အသံမထွက်အောင် နှခေါင်းပိတ်ပြီးရယ်ရတာအသက်ရှူရပ်ပြီး ဗိုက်တွေတောင်နာကုန်ပြ:P:Pီ။ ကြံ ကြံဖန်ဖန်ဗျာ။
အကောင်းလည်း ပြောရသေးတယ် ချိတ်ချိုးမှာနော
ကျနော်တို့က တနေ့တနေ့ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ဘာမှန်းမသိ တနေကုန်ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတော့ အခြားသူတွေလည်းအပျင်းပြေပါစေ ကိုယ်လည်း ငြီးငွေ့မှုလေးတွေ ပျောက်အောင်ပေါ့လေ
ဒီလိုဘဲ တခါတလေ ပေါက်ကရလျှောက်ရေးမိတာပါ
စာမျက်နှာလေးသွားမှာမို့ အက်ဒမင်ဂျီးက အရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်မျိုး သေသင့်ကြောင်းပါဗျာ
ကိုဇူးလူးရေ ကျွန်တော် လည်း အကို့လိုပဲ ပေါ စရင်ဝင်ပါပဲဗျာ။ အရေးမယူပါဘူး အရယူမှာပါ။ ညီမရှိရင်လေ။ ဟီးဟီး...
ဟ ဟ ပွဲတွေကြမ်းကုန်ပြီ..
ပွဲ မကြမ်းပါဘူးဗျာ။ ချစ်လို့ စတာပါ။ ဟီးဟီး
ဒီ ဆိုဒ် ကို သိလိုက်၇တာကွှျန်တော်ဗဟုသုတ တိုးပါတယ်။
နောက်ပိုင်း မြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ လည်း အဲ့ အမြန်လောက်ကပဲ စခဲ့တာပါ။ ရေးချင်စိတ်နဲ့ ရေးရင်နဲ့ နောက်ပိုင်း မြန်လာပါတယ်။ ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။
ဒီဆိုဒ် http://kyawnux.blogspot.com/ နဲ. http://myanmarcupidclub.net/exchange/ ကို
ကြည်.၇င် internet option က acessibility က formatting နဲ. user style sheet ကို ပြန် ပြောင်းနေ၇တယ်။ ပြောင်းစ၇ာမလိုအောင် ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ။ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျာ။
1st ones can see, 2nd cant
2nd ones can see, 1st cant.
ကျွန်တော်လဲမေးချင်နေတာကြာပြီဗျ။ အခုလိုမေးပေးတဲ့ ကိုနေတိုး နဲ့ ဖြေပေးတဲ့ ကိုကြယ်လေးကို လဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။:77:
ပုံတွေကို အမ်ဇက်ကို upload မတင်ဘဲ ဘယ်လိုတင်ရမလဲ
အပေါ်ကလင့်ကို အသုံးပြုနေပါတယ်။ဓါတ်ပုံအတွက် အခုထိတော့ အကောင်းဆုံပဲရုရှားဆိုဒ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ပြောပြမယ်။မိမိကွန်ပျူတာထဲက ဓါတ်ပုံကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Browser ပြီး ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံရွေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့ Code ထည့်ရမယ့်နေရာမှာ သူပြထားတဲ့ Code: ဥပမာ 1500 ပေးထားတာကို ထည့်လိုက်ပါ။နောက် закачать! ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။